၁၃ ရက်နေ့ မိတ်ဆက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ iPhone 12 Series ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ Feature တွေ ထွက်ပေါ်လာ – DigitalTimes
၁၃ ရက်နေ့ မိတ်ဆက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ iPhone 12 Series ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ Feature တွေ ထွက်ပေါ်လာ
iPhone 12 Series ကို ၁၃ ရက်နေ့ ကြေညာတော့မှာပါ။ အခုတော့ မိတ်ဆက်ပွဲ မတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအလိုမှာပဲ သူတို့ရဲ့ ဈေးနှုန်း၊ ရောင်းမယ့် အချိန်၊ မော်ဒယ်တွေ၊ အရောင်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တချို့ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဖုန်း အားလုံးမှာ 5G ပါလာမှာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် မော်ဒယ်မှာလည်း 5G mmWave ထည့်ထားမှာပါ။ ဘူးထဲမှာ နားကြပ်နဲ့ အားသွင်းတုံး ပါလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
iPhone 12 မော်ဒယ်တွေမှာ Super Retina XDR Display နဲ့ Dolby Vision Video တွေ ထောက်ပံ့ထားမှာပါ။ Screen Glass နည်းပညာ အသစ်၊ Ceramic Front Cover တွေ ပါလာမှာ ဖြစ်ပြီး ခြစ်ရာနဲ့ ပြုတ်ကျတဲ့ ဒဏ်ကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ 15W Magsafe Wireless Charging Support ထောက်ပံ့ထားမှာပါ။
မော်ဒယ်၊ ဈေးနှုန်းနဲ့ အရောင်တွေကို အောက်မှာ လေ့လာပါ။
iPhone 12 series & HomePod Mini rumoured price, versions
•	iPhone 12 Mini (5.4 inches), starts at US$ 699 (Rs. 51,110 approx.). Available in 64GB/128GB/256GB versions. Black, White, Red, Blue and Green colours
•	iPhone 12 (6.1 inches) starts at US$799 (Rs. 58,410 approx.). Available in 64GB/128GB/256GB versions. Black, White, Red, Blue and Green colours
•	iPhone 12 Pro (6.1 inches), starts at US$ 999 (Rs. 73,050 approx.). Available in 128GB/256GB/512GB versions. Gold, Silver, Graphite and Blue colours
•	iPhone 12 Pro Max (6.7 inches), starts at US$ 1099 (Rs. 80,370 approx.). Available in 128GB/256GB/512GB versions. Gold, Silver, Graphite and Blue colours
•	HomePod Mini with 3.3-inch speaker, S5 processor at $99 (Rs. 7,240 approx.)
OPPO A73 5G ရဲ့ Specs နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာ
Huawei Mate 40 Series ကို ဒီလ ၂၂ ရက်နေ့ ကြေညာမှာ သေချာပြီ